Soosaarayaasha & Alaab-cadayda Butros | Warshadda Burushka Shiinaha
Burush laba dhinac ah
Dhameystirka xayawaanka shanlayda ah
Ahama steel xayawaanka shanlo
Hilibka xayawaanka ee Paw ciddiyaha
Xayawaanada ciddiyaha xayawaanka
Filinka ciddiyaha xayawaanka
Koorsooyin Eey Xirashada Leashes
Gacmo gashi Mitts Massage Qalabka Qubeyska
Galoofinta Gacmo-galinta Mitts
Badbaadinta Ilkaha Badbaadada
Set Scissor Set
Maqas khafiif ah
Cunnooyinka Bow Bowl
Dhalada Biyaha Xayawaanka
Alaabta lagu ciyaaro
Waxyaabaha lagu ciyaaro ee xayawaanka ah
Alaabta Caruurta lagu xidho
Alaabada Caagga ah
Dambiisha Qashinka Eeyaha
Qalabka Bacda Qashinka Bixiya
Feejignaan Culus oo Casri ah ...
Nadiifinta Slicker caday
Duq culus oo Ey dib looga ceshan karo ...
Ey Qabashada Bacda Eyga
Qalab Bacda Dog Poop
Caday Ey Slicker cadaan ah
1. Si tartiib ah timaha ugu cadaya jihada koritaanka timaha. Dareemka ciribtira timaha dabacsan, baabi'inaya dhaldhalaalka, guntimaha, huurka iyo wasakhda ku xanniban.
2. Biinanka dib loo laaban karo waxay kuu keydinayaan waqti nadiif ah oo nadiif ah. Markuu suufku buuxo, waxaad timaha ku sii deyn kartaa adoo riixaya badhanka ku yaal dhabarka suufka.
3. Burushka cufan eeyaha weyn ee leh laqabsiga jilicsan ee gacanta ku haya, si fudud u riix batoonka dusha burushka si aad si fudud u sii deyso timaha.waxaana hubaal ah inay kaa caawin doonto inaad u sameyso eeyo aad ku raaxeysato oo xiise leh
Caday Slimka Ey
1.Dog qurxinta cirifka jilicsan ayaa leh madax caag ah oo waara oo leh biinamo tayo sare leh, waxay ku dhex geli kartaa qoto dheer jaakada si looga saaro jaakad dabacsan.
2.Doogga qurxinta ilkaha jilicsan ayaa si tartiib ah u tirtira timaha dabacsan, wuxuu baabi'iyaa isku-xidhka, guntimaha, jihada iyo wasakhda ku xanniban gudaha lugaha, dabada, madaxa iyo meelaha kale ee xasaasiga ah adigoon xoqin maqaarka xayawaankaaga.
3. Eygan qurxinta eeyaha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qalajiyo xayawaanka leh maqaarka xasaasiga ah iyo dharka wanaagsan ee jilicsan.
4.Kordhinta wareegga dhiigga oo ka taga xayawaankaaga xayawaanka ah oo jilicsan oo dhalaalaya. Ka dhigista cadayga xayawaankaaga inay ahaato waayo-aragnimo raaxo leh oo raaxo leh.
5.Ergonomic xajinta naqshadeynta waxay siisaa raaxo marka aad cadayaysid si kasta oo aad shanleeysid, waxay fududeyneysaa is qurxinta.
Burush Dog Qalabka Dog Burushka
Qalabka xayawaanka lagu qurxiyo eey ee loogu talagalay qalab wax ku ool ah, wareega wareega wuxuu kala saaraa timaha eeyga dabacsan, kooxda Bristle waxay qaadaysaa daadinta xad dhaafka ah iyo dander
Burushka eyda qalabka qurxinta xayawaanku waxay ka caawisaa qaybinta saliidaha dabiiciga ah ee jaakad dhalaalaysa Burush tartiib ah jihada koritaanka timaha, iyada oo taxaddar gaar ah la leh meelaha xasaasiga ah.
Xannaaneynta xayawaankani waxay isticmaashaa gacan qabasho raaxo leh, way ka ammaan badan tahay.
Burush laba-geesood oo jilicsan oo jilicsan
1.Bet Slicker Brush wuxuu qabtaa shaqo aad u wanaagsan nadiifinta timaha qoyan, gaar ahaan dhagaha gadaashiisa.
2.Ituna waa mid jilicsan, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu raaxeeysa eeyga.
Burushka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa laba jibaaraya timaha wax yar, markaa dibadbaxyada caadiga ah ee eyda ayaa inta badan la tirtiray.
4.Buraashkani wuxuu hoos ugu sii dhacayaa timaha si uu uga caawiyo ka hortagga maatida.
Is Nadiifinta Slicker burush eeyaha
1.Birishkan isdaba-marinta is-nadiifinta eeyaha ayaa ka sameysan bir bir ah, sidaa darteed waa mid aad u adkeysi badan.
2.Burushka siligga ee foorarsiga ah ee burushkeena cirifka ah waxaa loogu talagalay inuu si qoto dheer u dhex galo dharka xayawaankaaga adigoon xoqin maqaarka xayawaankaaga.
3.Buraashka isdaba-marinta is-nadiifinta eeyaha ayaa sidoo kale uga tagi doona xayawaankaaga jaakad jilicsan oo dhalaalaysa ka dib markaad isticmaasho adoo duugaya isla markaana hagaajinaya wareegga dhiigga.
Isticmaalka joogtada ah, is-nadiifinta buraashka nuujintu wuxuu yarayn doonaa daadinta xayawaankaaga si fudud.
Nadiifinta Butros Slicker caday
Cinwaanka:No.8 wadada Nanguandu, Yuexi Town, Degmada Wuzhong, Suzhou City, Jiangsu China